» सबै त्यागेर फेरि जङ्गल जान सक्छु : प्रचण्ड
सबै त्यागेर फेरि जङ्गल जान सक्छु : प्रचण्ड
२०७६ बैशाख २३,सोमबार ०७:१५
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै त्यागेर जङ्गल जान सक्ने बताएका छन् । कार्ल मार्क्सको २ सय १ औँ जन्मस्मृति कार्यक्रममा आयोजित समृद्धि र समाजवाद हामी कहाँ छौँ ? विषयक विमर्श कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्
कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले भने, मैले जसरी भन्न खोजेँ । मेरा केही बुझाई । भावना अनुभवहरु सेयर गर्ने हिसाबले प्रस्तुत भएँ । र म के ठान्छु भने, फेरि एक पटक सम्पूर्ण चिज त्याग गरेर जङ्गल जान्छु भन्ने विश्वास छ । जरुरी परे । उनले थपे, मलाई गाह्रो लाग्दैन । कतिपयलाई के लाग्छ भने, यत्रो भइसक्यो के गर्ने ? कसरी सकिन्छ भने जस्तो पनि हुन्छ । मलाई चाहिँ साँच्चै हेर्नु होला, कमरेडहरु तपार्ईंहरुको साथ चाहिन्छ, साथ रहेन भने एक्लै जोगी बन्न त जान्न । जोगी भएर हुने कुरा त छैन । तपाईंहरु साथमा हुनुभयो भने एउटा क्लाइमेक्समा पार्टी र आन्दोलनलाई लगेर मात्र माथि जाने विचार छ ।
हामीले ग्रेट डिवेट सुरु गर्नैपर्छ । कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ, सम्पूर्ण कमरेडहरु यो महान डिबेटमार्फत, महान पार्टी बनाउने कुरा हो । महान आन्दोलन श्रृष्टि गर्ने, महान पार्टी बनाउने कुरा हो । तपाईं हामीले सकेनौँ भने मैले भनेको छु, वैचारिक रुपमा यतिबेला हामी अफेन्सिभ ठाउँमा छौं । हामीले त्यो विचार र संस्कृति निर्माण गर्न सकेनौँ भने ५० औँ वर्ष दुनियाँमा अर्को विचार बनाउन सजिलो देखेको छैन ।
म अपिल गर्दछु, साच्चै एउटा ठुलै रणनीति, सपना बोकेर पार्टी एकता गरियो । प्रधानमन्त्री बन्न पार्टी एकता गरेको होइन । यो सरकार कब्जा गर्न मात्र पार्टी एकता गरिएको होइन, एउटा नयाँ ढंगको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नका लागि, एउटा बहसमार्फत विचारलाई परिमार्जन गर्नका निम्ति र समाजवादी आन्दोलनको नयाँ युगतिर लैजाने र नेपालबाट संसारभरिका श्रमजीवीहरुलाई सन्देश दिने गरी एकता गरिएको हो ।
पार्टी एकता महान चिज, राष्ट्रको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । समाजवादको आवश्यकता हो । तर पार्टी एकता भनेको चाहिँ फेरि बडो शान्ति, सुव्यवस्था, आरामसँग सबैलाई आनन्द हुन्छ र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ भने भ्रम हो । पार्टी एकता त महान विवादको सुरुवात पनि हो । महान संघर्षको सुरुवात पनि हो । महान बहसको सुरुवात पनि हो । सबैलाई त्यसैमा तम्तयार भएर एकतामा जाऔँ भनेको थिएँ । अहिले महान बहसमार्फत महान विचारको आविष्कार गर्ने, महान पार्टीको विकास गर्ने, महान संस्कृति निर्माण गर्ने, महान सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्नका निम्ति म अपिल गर्न चाहान्छु ।